Ekhethekileyo kubathandi bendalo! - I-Airbnb
Ekhethekileyo kubathandi bendalo!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLjubisa
UKUCOCWA KWAYE AKUBUSWA UKUTHINTELA UKUSASAZA KWE-COVID-19
Ukuba ukhangele indawo emnandi kunye nethuleyo, kwindawo ekhangayo kakhulu yesixeko, ukuze uphumle kwaye uphumle emva kokutyelela ixesha elide kwaye ngamanye amaxesha okhathalayo , uhlala kwindawo efanelekileyo.Ukusuka apha uya kuba kufuphi nabo bonke. iindawo ezinomdla esixekweni kwaye uya konwabela ikhefu kwindawo ezithandekayo.
Imalunga ne-55 m 2 indlu inegumbi lokulala, igumbi lokuhlala, ikhitshi- igumbi lokutyela, igumbi lokuhlambela, i-anteroom kunye neveranda, inokulungela kwaye ikhululeke kubantu abathathu (3). Zimbini kuphela izinyuko ukusuka emhlabeni ukuya kumnyango wokungena. .IiWindows zinezikrini zokunqanda izinambuzane kunye nezixhobo zokukhusela ilanga.
Le ndlu ikwiNduli ye-Topcider (phezulu kwe-Senjak) apho uya kuphefumla owona moya ubalaseleyo esixekweni kwaye yindawo yokuhlala ekhethekileyo yesixeko kunye nendawo yozakuzo. Ukuhamba ngebhayisekile okanye ikofu okanye isidlo sasemini ngemini enelanga.Iflethi ibekwe kwindawo enoxolo kodwa isekufutshane nokutya okukhulu kunye nexesha elimnandi.Iikhilomitha ezi-3.5 kuphela kude neziko lokuthengisa kunye nolonwabo lwesixeko, isitalato saseKnez Mihajlova, inqaba yakudala yaseKalemegdan. kunye nekota ye-bohemian Skadarlia. Ukusuka kwigumbi lokuhlala, umntu unokufikelela ngokulula kwindawo yokuphumla eyaziwayo ye-Ada echibini elineebhari ezininzi, iindawo zokutyela kunye neeklabhu, ezikumgama we-20 ukuya kwimizuzu engama-30, ngeenyawo. kwindawo eyayisakuba yiYugoslavia, ekumgama wemizuzu eli-15 kuphela xa uhamba ngeenyawo ukusuka kwindlu. Umboniso wesixeko umalunga nomgama ofanayo nalowo ulungele iindwendwe zezoshishino. Ungalibali ukuba iivenkile ezininzi zekofu ezintle kunye neendawo zokutyela zesintu ezikummandla -imizuzu emi-5 ngeenyawo ukusuka endlwini kwaye kumgama ofanayo kukho iibhanki ezininzi, indawo yokubhaka kunye nevenkile enkulu ebonelelwe kakuhle.
OKUNYE malunga nento omawuyenze, into omawuyibone kunye nalapho ungaya khona eBelgrade, nceda ujonge indawo yoMbutho wabakhenkethi baseBelgrade. www. tob.rs
Ngalo lonke ixesha indawo yokupaka simahla phambi kwendlu.
I-air conditioning, ukufikelela kwi-intanethi, ibhoyila, ifriji, i-cable TV, ilinen yebhedi kunye neetawuli
Iimpahla zokupheka kunye nekhitshi
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo, kunye ne
itoaster, iketile, isixhobo sekofu yokucoca, intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina, isicoci sevacuum, isomisi seenwele
Zonke izinto eziluncedo zibandakanyiwe kwixabiso.
Amaxabiso adweliswe kwicala lasekunene ngosuku .Akukho ntlawulo yokucoca isiphelo.
Le yindawo yokuhlala edolophini enezitalato ezolileyo, ejikelezwe ziipaki kunye nohlaza.Iindlela zokubaleka zikufutshane kakhulu. Kufutshane neflethi kukho iindawo zokutyela ezintle zesintu kunye neevenkile zekofu.
Umbuki zindwendwe ngu- Ljubisa
Ndiza kufumaneka nangaliphi na ixesha, kwaye ndithetha isiNgesi, kwaye ngaphezulu okanye ngaphantsi kwesiTaliyane nesiFrentshi.